एजेन्सी । यौनसम्पर्कका बेला हरेक कुरालाई गम्भीर रूपले लिने गल्ती नगर्नुहोस् । सम्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । सम्भोगका विषयमा तपाई वा जोडीको मनमा केही शंका भएमा पहिले त्यसलाई हटाउनुहोस् र मात्र सम्भोगको सिलसिला अघि बढाउनुहोस् । यौनजीवनको पर्याप्त आनन्द लिनका लागि तपाई शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । स’म्भोगलाई निरन्तरता दिनुहोस् । […]
चिप्लेढुङ्गा, ४ जेठ । “अहिले स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो परिचयसहित हिँड्न पाउँदा निकै खुशी छु, कुनै बेला छक्का र हिजडा भनेर अपमानित गर्नेहरुले पनि अहिले विन्दिया जी भनेर सम्मान गरेको पाउँछु”, नौलो बिहानी पोखराका अध्यक्ष विन्दिया गौतमले भन्नुभयो, “चौध वर्ष अगाडिदेखि आजसम्म अधिकांश समय मानसिक विक्षिप्तता लिएर बाँचेको अनुभव छ ।” जैविकरुपमा छोरा भएर जन्मँदा परिवार र […]
आफ्नो पार्टनरसँग यौन सम्पर्क गर्दा यी ४ तरिका अपनाउंदा फाइदा मिल्नेछ
एजेन्सी, मानिसको जीवनमा गास, वास र कपासको आवश्यक पर्छ । त्यो संगै जीवनलाई सुमधुर बनाउनको लागि पनि यौन सम्पर्कको पनि त्यतिनै आवश्यक छ । यौन सम्पर्कमा भरपुर सन्तुष्टिका लागि मस्तिष्क र शरीरकाबीच तालमेल एकदमै आवश्यक छ । यौन सुख चरम अवस्थामा त्यतिबेला पुग्छ, जतिबेला पार्टनरहरुकाबीच शरीर एवं मस्तिष्कमा एक आपसमा एकाकार हुन्छ । सेक्स विशेषज्ञअनुसार […]
एजेन्सी, इंडिया टुडेले गरेको सर्भे अनुसार, भारतमा जीवनसाथीसँग भएको बेला पनि अधिकांश मानिस तनावमा रहने गरेका छन् । उनीहरुलाई कार्यालयको तनावले सताएको हुन्छ । सर्भेका अनुसार बैंगलोरमा ४२ दशमलव ९ प्रतिशत मानिस सेक्सको समयमा पनि तनावमा हुन्छन् । बैंगलोरमा ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम मानिस जीवनसाथीसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दछन् । राँची भारतको सानो शहर हो […]
एजेन्सी, यौनका विषयमा पनि देशैपिच्छे फरक–फरक कानून रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा कानूनले नै खुलेआम यौन सम्बन्ध राख्न छुट दिएको छ भने कयौं कतिपय देशमा यौनका बारेमा खुलेर कुरा गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । कतिपय देशमा अनौठा अनौठा व्यवस्था समेत छन् । स्पेनमा समुद्री किनारमा यौन राख्न प्रतिबन्ध छ । यदि यसो गरेको भेटिए […]
महिलाको योनीबाट सेतो पानी बग्नुलाई ल्युकोरिया (Leucorrhoea) भन्दछन् । यो महिलाहरुको साधारण समस्या हो । यसलाई ह्वाइट डिस्चार्ज पनि भन्ने गरिन्छ । यो समस्या महिलाहरुमा महिनावारी भन्दा पहिले वा पछि एक या दुई दिन हुने गर्दछ । तर यस्तो समस्या लामो समय हुने गर्छ भने यसलाई रोगको सक्रमण सम्झनु पर्दछ । किन हुन्छ ल्यूकोरियाको समस्या […]
एजेन्सी । महिनावारी भएको बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहँदैन भन्नु भ्रम हो । किन की शुक्राणु सात दिनसम्म पनि सक्रिय हुन्छन् । जसका कारण न्यून भएपनि गर्भ रहने सम्भावना रहन्छ । प्रथम पटक शारीरिक सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहँदैन भन्नु पनि भ्रम मात्र हो । महिनावारी नहुँदै शारीरिक सम्पर्क राख्दा गर्भ रहँदैन भन्नु पनि भ्रम […]
एजेन्सी, पुरुषमा महिलाले केहि कुराहरु खोज्छन् । कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ । एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो सम्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आकर्षित गर्छ । दीर्घ सम्बन्धमा […]
एजेन्सी, महिलाहरुमा महिनावारी हुनु भनेको भनेको प्राकृतिक नियम हो । हरेक महिनाको अन्तिममा हुने गर्दछ । १२-१३ बर्षको उमेरबाट महिनावारी सुरु हुन्छ ।महिनावारी समयमा नहुने कारण भनेको जुन औषधी महिनावारीको समयमा खानुहुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा पनि कहिले–काहीँ महिनावरी गडवडी हुने गर्दछ, त्यस्तै तपाइलाई डिप्रेसन वा कुनै तनाव भएमा यस्तो समस्या हुने गदैछ । धेरै शारीरिक […]
एजेन्सी, अध्ययनका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाले धेरै सोच्छन् । यौनको विषयमा युवाहरुको भन्दा नौलो अनुभवको खोजिमा युवतीहरु रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यति मात्रै होइन मौका मिल्ने हो भने युवतीहरु अनौठा(अनौठा यौनिक अभ्यासको कल्पनासमेत गर्छन् । सुन्दर युवती देखेर पुरुषहरु मात्र लोभिने होइन महिलापनि लोभिने तत्थ बाहिर आएको छ । लोभिने यतिसम्मकी महिलाहरु सुन्दर […]
शारीरिक सम्पर्कको समय पुरुषलाई राम्रो लाग्ने कुराहरु
एजेन्सी, सेक्सी शब्द सामान्यतया महिलाका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पुरुषलाई भने कम्प्लिमेन्ट हासिल गर्ने निकै कम मौका प्राप्त हुन्छ । यी सबका बाबजुद फिमेल पार्टनरले चाह्यो भने आफ्नो मेल पार्टनरलाई सेक्सी र हट भनेर उनको सेल्फ कन्फिडेन्टलाई बढाउन सक्छन् ताकि बेडमा उनको परफरमेन्स झन राम्रो हुन सकोस् । तीमि निकै सेक्सी छौं म केवल […]
थाहा पाउनुहोस्, यौन सम्पर्कको लागि युवतीलाई कसरी फकाउने ?
एजेन्सी, एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ । सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा (फोर प्ले) गर्ने गर्नुपर्छ । यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर बनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगार र सयुक्त ठट्टालाई पनि प्राक्कक्रिडा भनिन्छ […]
कस्तो अवस्थामा महिलाको मनमा यौन सम्पर्कको चाहना हुन्छ ?
एजेन्सी, एक सर्वेक्षण अनुसार महिलाले यौन सम्पर्कको कल्पना गर्नु धेरै सामान्य मानिएको छ । महिलाहरु यौन सम्पर्कको बारेमा खुलेर बोल्न लजाउँछन् । महिलाहरु शरीरका विभिन्न भागहरूमा क्रीम, चकलेट, सस वा आइसक्रिम लगाएको कल्पना गर्दछन् । यो फोरप्ले सेसनले धेरै संतोषजनक अनुभव प्रदान गर्न सक्छ । एक ठाउँमा शारिरिक सम्बन्ध राख्नु बोरिङ हुन सक्छ, त्यसैले धेरै […]
पढ्नुहोस्, यस्ता छन् यौन सम्पर्कको प्रकारहरु
एजेन्सी, आफ्नो बेडरुमलाई राम्रो सँग सजाउनुस र पार्टनरलाई सरप्राइज दिनुस । उनको मनपर्ने खानेकुरा र परफ्यूमले रुमलाई आकर्षक बनाउनुस । तपाईको पार्टनर निकै खुसि हुनेछ । कहिले काहि पार्टनरसँग होलिडे मनाउन जाँदा तपाई रुमबाट कुनैपनि बेला बाहिर नै नस्किेको अवस्था आएको छ । पार्टनरलाई आफ्नो सेक्सी स्टाइलले रुम सम्म लग्नुस र आफ्नो रोमान्टिक तरिका अपनाउँदै […]
शावर सेक्सको लागि यी टिप्सहरु प्रयोग गर्नुहोस्
एजेन्सी, २०१४ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार शावर सेक्स सुरक्षित सेक्सको लागि धेरै नै प्रसिद्ध छ । १ हजार मानिसमा गरिएको सो अध्ययनमा ५४ प्रतिशत कपलले यस सेक्समा संतुष्टि महसूस गर्ने गर्छन् । शावर सेक्स जति सुरक्षित मानिन्छ, त्यति नै त्यसको लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ । शावर सेक्सका लागि दुवै पार्टनर तयार हुनुपर्छ । शावर […]
थाहा पाउनुहोस्, महिलाहरुले महिनावारी हुँदा कति समयमा प्याड परिवर्तन गर्नुपर्छ ?
एजेन्सी, महिनावारीका बेला सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन नसकेमा विभिन्न किशिमका संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने प्याड, लुगा वा न्यापकिन कस्तो प्रकारको छ र कति समयको अन्तरालमा परिर्वतन गर्ने गरिन्छ । यी सब कुरा सिधै स्वास्थ्यसँग जोडिने गर्दछ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार महिनावारीका बेला प्रत्येक ४ घण्टामा प्याड बदल्नुपर्दछ । […]
सपनामा यौन सम्पर्क गरेको देखिनुका कारणहरु
एजेन्सी, सपना डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी जस्ता देखिन्छ । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि सेक्स हर्मोनले एकातिर यौनव्यग्रता तथा यौन तनाव बढाउँछ भने अर्कोतिर यस अवस्थामा वीर्यको पनि उत्पादन हुन थाल्छ । अनि वीर्यले स्वाभाविकरूपमा बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ । यौनचाहना प्रबल हुन थालेपछि एक किसिमको यौन तनाव बढ्न थाल्छ । यसलाई […]
यस्तो छ यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडी महिलाहरुको तयारी
एजेन्सी, सेक्स पहिला महिलाहरु यसरी तयारी गर्छन जब म आफ्नो केटा साथिका साथ यौंनसम्पर्कको योजना बनाउँछु तब भित्री वस्त्र कुन रङको र कस्तो प्रकारको लगाउँ भनेर म खुब विचर गर्छु । त्यो बेला म सबैभन्दा सेक्सी देखिने पेन्टी तथा ब्रा लगाउने कोशिस गरिरहेकी हुन्छु । सेक्स सम्बन्ध बनाउन भन्दा पहिला सेभिङ, थ्रेडिङ तथा शरीरका विभिन्न […]